एक एक्वैरियम सजाउन6विचारहरु माछाहरुको
एक एक्वैरियम सजाउन6विचारहरु
त्यहाँ छ सजावट को एक सजावट को लागी एक एक्वैरियम को लागी महान विचार हो, चट्टान वा लाठी बाट छाती र गोताखोर वा अधिक कल्पनाशील संग क्लासिक आंकडाहरु को लागी, अनानास जस्तै SpongeBob बस्छ।
यद्यपि, यो न केवल सजावट छनौट गर्ने बारे मा हो कि हामी हाम्रो एक्वैरियम को लागी सबैभन्दा मन पराउछौं, तर ती जान्न को लागी कि हामी राख्न सक्दैनौं।, साथ साथै उनीहरुलाई कसरी सफा गर्ने र सजावट मा केहि सुझावहरु को बारे मा जान्न को लागी। हामी यस लेखमा यो सबै कभर गर्नेछौं। यसको अतिरिक्त, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ यो अन्य पोस्ट को बारे मा पढ्नुहोस् हाम्रो एक्वेरियमको तल सजावट यदि तपाइँ अधिक विचारहरु चाहानुहुन्छ।
1 विचारहरु तपाइँको एक्वैरियम सजाउन
1.1 बजरी वा बालुवा
1.3.1 कृत्रिम बोटबिरुवाहरू
1.3.2 प्राकृतिक बोटबिरुवाहरू
1.6 सजावटी कागज
2 एक्वैरियम मा के राख्नु हुँदैन
2.2 अनुपचारित प्राकृतिक तत्वहरु
2.3 तयारी नभएको सजावट
3 सजावट कसरी सफा गर्ने
4 सजावटी टिप्स
विचारहरु तपाइँको एक्वैरियम सजाउन
एक शक बिना, एक एक्वैरियम सजावट सबैभन्दा रमाईलो गतिविधिहरु मध्ये एक हुन सक्छ, किनकि हामी हाम्रो एक्वैरियम को दृश्य उज्यालो गर्न सक्छौं र यो चार बजरी र एक सुकेको प्लास्टिक बिरुवा संग एक साधारण ठाउँ हो कि हटाउन सक्छौं। यसको विपरीत, बजार मा हामी विकल्पहरु को एक धेरै छ:
बजरी वा बालुवा
Dehner - बजरी को ...
Croci A4000140 Gravel को लागी ...
प्रत्येक एक्वैरियम को आधार, शाब्दिक, छ बजरी वा बालुवा, जुन तल राखिएको छ। जबकि बजरी ढु of्गा को रूप मा आउछ (एक अधिक प्राकृतिक वा रंगीन उपस्थिति संग, र विभिन्न आकार को), बालुवा ती माछाहरु को लागी आफैंमा दफन गर्न वा आफ्नो बासस्थान मा तल मा धेरै समय बिताउने प्रवृत्ति को लागी एकदम सही छ। , ईल जस्तै।
यद्यपि, कहिले काँहि बजरी सबैभन्दा राम्रो समाधान होविशेष गरी हाम्रो सान्त्वना को लागी। उदाहरण को लागी, बालुवा को सबै भन्दा ठूलो कमजोरी मध्ये एक हो कि सफाई यो धेरै भारी छ, र कि यो सबै ठाउँमा जान्छ, त्यसैले तपाइँ यसलाई अधिक बारम्बार प्रतिस्थापन गर्न को लागी हुनेछ।
साथै, यो अत्यधिक सिफारिश गरीन्छ कि तपाइँ प्राकृतिक सामाग्री को लागी छनौट गर्नुहोस्, किनकि यदि उनीहरु सिंथेटिक वा गिलास हुन् उनीहरु लाई राम्रो जीवाणु वनस्पति (याद छ, एक्वैरियम को लागी महत्वपूर्ण) लाई सजीलै उभर्न को लागी अनुमति दिदैन।
शौक - मूल ...
F.lashes Mangrove जरा...
Hygger सजावट ...
यदि तपाइँ तपाइँको एक्वैरियम एक देहाती स्पर्श दिन चाहानुहुन्छ, तपाइँ लग को लागी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आँखाको पट्टीमा झूट को धेरै थुप्रो छन् घरपालुवा जनावर पसल वा अमेजन मा कि प्रकृति को धेरै राम्रो नक्कल, र, यसको अतिरिक्त, सिंथेटिक भएको हुनाले उनीहरु सडेन, जो तपाइँको माछा को लागी अनिश्चितकालीन आश्रय प्रदान गर्न सक्छ।
यद्यपि यो एक एक्वैरियम मा प्राकृतिक काठ को उपयोग गर्न सम्भव छ, तपाइँ धेरै सावधान रहनु पर्छ, किनकि यो एक धेरै संवेदनशील मुद्दा हो। काठ को केहि प्रकार, उदाहरण को लागी, पानी मा एसिड जारी छ कि तपाइँको माछा लाई मार्न सक्छ। धेरै जसो पनि फ्लोट, तेसैले तपाइँ उनीहरुलाई पहिले उपचार वा उदाहरण को लागी एक ढु with्गा संग तल सम्म उनीहरुलाई प्रोप गर्नु पर्छ। यस प्रकार, यो सिफारिश गरीदैन कि तपाइँ काठ कि तपाइँ आफैं स collected्कलन गर्नुभएको छ, विविधता पत्ता लगाई बिना र खाता मा लिए बिना यदि उनीहरुले कीटनाशक प्रयोग गरीरहेछन्।
Vibury बोटहरु ...
अज्ञात प्लान्ट DE...
बोटबिरुवाहरू तिनीहरू हाम्रो एक्वैरियम सजाउन को लागी सबैभन्दा क्लासिक विचारहरु को एक हो। ती कृत्रिम वा प्राकृतिक हुन सक्छन्, हामी तल देखीनेछ।
कुनै श .्का छैन उनीहरु को हेरचाह गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो छ (मूलतः किनभने उनीहरुलाई हेरचाह को आवश्यकता छैन)। यसको अतिरिक्त, उनीहरु लाई अधिक रंगीन रंगहरु छन् र तपाइँको स्वास्थ्य लाई नकारात्मक असर पार्ने डर बिना तपाइँको माछा को लागी आश्रय प्रदान गर्दछ। साथै, तिनीहरू मर्दैनन् वा सडेनन्, जसले पानीमा कणहरू छोड्न सक्छ जसले नाइट्रोजन स्तर बढाउँछ, जसले तनाव र तपाइँको माछालाई बिरामी बनाउन सक्छ।
यद्यपि उनीहरु शुरुवातकर्ताहरु को लागी अत्यधिक सिफारिश गरीएको छैन, प्राकृतिक बिरुवाहरु को पनि आफ्नो लाभ छ। उदाहरण को लागी, राम्रो संग रिलीज अक्सिजन को लागी जब CO2, केहि जुन सधैं अत्यधिक तपाइँको माछा को लागी सिफारिश गरीन्छ (याद छ कि उनीहरु लाई बाँच्न को लागी अक्सिजन चाहिन्छ) को उपयोग गरीन्छ। जे होस्, जब प्राकृतिक बिरुवाहरु किन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरु एक निष्फल जार मा आउँदछन् कि तपाइँ stowaways, जस्तै घोंघा, कि तपाइँको एक्वैरियम मा आक्रमण गर्न सक्नुहुन्न।
Croci A4022043 Gravel को लागी ...
टीएम एक्वाटिक्स - स्टोन अफ...
पत्थर, लग जस्तै, कुनै पनि एक्वैरियम सजाउन क्लासिक्स को एक हो। तपाइँ उनीहरुलाई धेरै स्थानहरुमा पाउन सक्नुहुन्छ र, यस मामला मा, प्राकृतिक पत्थर को उपयोग लग को रूप मा खतरनाक छैन। अझै पनी, यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि उनीहरु को उपयोग को लागी सुरक्षित छन्, केहि दिन को लागी पानी मा उनीहरुलाई भिजाउनुहोस् र तब जाँच गर्नुहोस् कि पीएच परिवर्तन भएको छैन।
अर्को परीक्षण यो जाँच गर्न को लागी कि ढु you्गा तपाइँ तपाइँको एक्वैरियम को लागी छनौट गर्नुभएको एसिड छैन कि तपाइँको माछा लाई मार्न सक्छ, धेरै छिटो छ। ढु on्गामा केही सिरका हाल्नुहोस्। यदि तपाइँ केहि गर्नुहुन्न भने, बोल्डर सुरक्षित छ। अर्कोतर्फ, यदि यो बुलबुले, यो एसिड हुन्छ, त्यसैले तपाइँ यसलाई एक्वैरियम मा जोड्नु हुँदैन। यो परीक्षण पनि हाइड्रोक्लोरिक एसिड संग गर्न सकिन्छ, तर यो धेरै खतरनाक छ (मँ अनुभव बाट भन्छु: मेरी बहिनी, जो एक भूविज्ञानी हो, एक पटक पानी को एक पूरा बोतल छोडेर म लगभग मरे)।
कृत्रिम सजावट धेरै ठाउँहरु मा बिक्री को लागी हो र, के राम्रो छ, उनीहरु पूरै जलमग्न हुन को लागी तैयार छन्, त्यसैले तपाइँ तपाइँको माछा को लागी कष्ट भोग्नु पर्दैन। र यदि त्यो पर्याप्त थिएन, तिनीहरूले मूर्तिहरु को एक आश्चर्यजनक विविधता प्रस्तुत, मुख्यतः सबैभन्दा क्लासिक (गोताखोर, खजाना चेस्ट, डुबेको जहाज, गोताखोर हेलमेट, भग्नावशेष, पूर्वी भवनहरु, बुद्ध ...) को बीचमा अधिक कल्पनाशील (Stonehenge, SpongeBob अनानास, एक स्टार वार्स AT-AT, ज्वालामुखी, च्याउ, खोपडी ...)।
POPETPOP टाँस्ने ...
यदि तपाइँ तपाइँको एक्वैरियम को गहिराई को एक बिट दिन चाहानुहुन्छ, वालपेपर एक समाधान हो। तिनीहरू वास्तवमा चित्रित छैनन्, तर तिनीहरू एक छापिएको फोटो हो, सामान्यतया चिपचिपा कागज मा, कि तपाइँ एक्वैरियम को पछाडि रहन सक्नुहुन्छ (बाहिर बाहिर स्पष्ट छ)। विशाल बहुमत एक समुद्री तट जस्तै आकार को हो, यद्यपि तपाइँ जंगलहरु, झरनाहरु संग अधिक मौलिक पाउन सक्नुहुन्छ ... पनी यदि तपाइँ कुनै पनी फोटोहरु तपाइँलाई मन पर्दैन, तपाइँ एक छाप्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ कि यस मामला मा तपाइँ यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्न को लागी, पनी, यदि यो पानी बाट बाहिर छ, यो अन्ततः गीला हुनेछ।
एक्वैरियम मा के राख्नु हुँदैन
त्यहाँ एक छ सामग्री को श्रृंखला हो कि यो पानी मा राख्न को लागी सिफारिश गरीएको छैन, जसरी हामी तल देख्नेछौं, र कि तपाइँ डुब्न को लागी प्रलोभन हुन सक्छ। उदाहरणका लागि:
कोरल सुन्दर छ, तर यो विषाक्त पदार्थ र ब्याक्टेरियाले भरिएको बानी छ कि तपाइँको समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र लाई बर्बाद गर्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, मरेको कोरल एक सुस्त र and र धेरै बदसूरत, गरीब चीज छ, त्यसैले यो सधैं एक कृत्रिम विकल्प को लागी अप्ट गर्न को लागी अधिक सल्लाह दिइन्छ तर आँखा को लागी अधिक चिसो र मनपर्ने हुन्छ।
अनुपचारित प्राकृतिक तत्वहरु
यो भन्दा पहिले कि हामी तपाइँलाई केहि विचारहरु लाई लग र प्राकृतिक पत्थर को उपचार गर्न को लागी कि तपाइँ पानी मा थप्न चाहानुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाइँ पक्का हुनुहुन्न र तपाइँ यस क्षेत्र मा एक नौसिखिया हुनुहुन्छ, तपाइँ अझ राम्रो कृत्रिम ढु and्गा र लाठी को लागी जानुहुन्छ.
तयारी नभएको सजावट
एक प्लास्टिक भारतीय तपाइँको एक्वैरियम मा धेरै मनमोहक हुन सक्छ, तर तपाइँ सजग रहनु पर्छ कि यो एक सजावट पानी मा डुबाउन को लागी उपचार छैन, त्यसैले तपाइँको माछा र बिरुवाहरु को लागी विषाक्त हुन सक्छ। एउटै कुरा अन्य "सजावट" को साथ हुन्छ कि तपाइँ उपचार गर्नुभएको छैन वा त्यो जस्तै उद्देश्य को लागी छैन, उदाहरण को लागी, सिक्का, खनिज, चित्रित गिलास ...
सजावट कसरी सफा गर्ने
हरेक पटक, जस्तै स्पष्ट छ, तपाइँ सजावट तपाइँको मछलीघर मा छ सफा गर्न को लागी हुनेछ। यसको लागी:
पहिलो, सफा शैवाल र कृत्रिम बिरुवाहरु कि तपाइँ एक्वैरियम मा पानी हटाउन र एक ब्रश संग बिना छ। धेरै नराम्रो नहुनुहोस् यदि तपाइँ उनीहरुलाई लोड गर्न चाहनुहुन्न।
त्यसपछि, एक बजरी वैक्यूम संग तल बाट बजरी सफा गर्नुहोस्। यस विधि संग तपाइँ न केवल ढु्गाहरु सफा गर्नुहुनेछ, तर तपाइँ यसलाई परिवर्तन गर्न वा पानी रिफिल गर्न को लागी यसको लाभ लिन सक्नुहुन्छ।
वैसे, यदि तपाइँ भित्र सजावट सफा गर्नुहुन्छ, एक धेरै कडा ब्रश को उपयोग नगर्नुहोस् यदि तपाइँ मूर्तिहरु खरोंच गर्न चाहनुहुन्न।
यदि तिनीहरू छन् भने पनि केहि धेरै सरल कदम, सच्चाई यो हो कि यो सबैभन्दा श्रमशील चीजहरु मध्ये एक हो जब एक्वैरियम को रखरखाव, तर धेरै राम्रो स्वच्छता बनाए राख्न को लागी महत्वपूर्ण छ।
आखिर के तपाइँको एक्वैरियम राम्रो छ वा एक हजार चीजहरु जसमा माछा देखीदैन संग एक मिश्रण को रूप मा, यो मात्र पैसा छ कि हामी खर्च गरीएको छ वा हामीले राखेको संख्या को संख्या मा निर्भर गर्दैन। उदाहरणका लागि:
विचार गर्नुहोस् ठाउँ तपाइँसँग के छ र तपाइँ के राख्न चाहानुहुन्छ (कृत्रिम वा प्राकृतिक बिरुवाहरु, आंकडा ...)
यदि यो ई होसमुद्री कोसिस्टम, एक सागर विषय राम्रो हुनेछ, जब यो मीठो पानी हो, एक नदी हो।
कस्तो प्रकार को बारे मा सोच्नुहोस् बालुवा वा बजरी आफ्नो माछा सूट।
धेरै चीजहरु सँगै नराख्नुहोस् यदि तपाइँ आफ्नो माछा तनाव वा एक अत्यधिक पूर्ण एक्वैरियम छ गर्न चाहनुहुन्न। प्राकृतिक बिरुवाहरु लाई धेरै ठाउँ को आवश्यकता छ।
कन्डरहरू छेद संग केहि तत्व जोड्नुहोस् जहाँ माछा लुक्न सक्छ।
एक अनुपात हो कि धेरै राम्रो संग काम गर्दछ राख्न को लागी छनौट गर्न को लागी हो केन्द्र मा एक ठूलो टुक्रा र छेउमा सानो को एक जोडी.
समय समयमा छ यो सिफारिश गरीन्छ कि तपाइँ मूर्तिहरु र सजावट को एक्वैरियम को तल मा सार्नुहोस् (जाहिर यो प्राकृतिक बिरुवाहरु को लागी लागू हुँदैन) आफैं र तपाइँको माछा को लागी विविधता दिन को लागी।
हामी आशा गर्दछौं कि यी विचारहरु एक एक्वैरियम सजाउन को लागी एक गाइड को रूप मा तपाइँको साँच्चै राम्रो बनाउन को लागी सेवा गरीएको छ। हामीलाई भन्नुहोस्, के तपाइँ कहिल्यै एक एक्वैरियम सजाउनु भएको छ वा तपाइँ हराएको महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाइँ प्राकृतिक वा कृत्रिम बिरुवाहरु को अधिक हुनुहुन्छ? त्यहाँ एक सजावट छ कि तपाइँ विशेष गरी मनपर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: माछाको » Accesorios » एक एक्वैरियम सजाउन6विचारहरु
एक्वैरियम को लागी CO2
एक्वैरियम ब्याकप्याक फिल्टर